Ny fomba hanomezana tongolo lay rehefa ririnina - ny voalohany sy faharoa mandoto, fotoana
Ahoana ny hanomezana tongolo lay taorian'ny ririnina - ny fomba tsara indrindra sy ny fomba fanafana
Raha fantatrao ny zavatra tokony homena ny tongolo lay aorian'ny ririnina, dia mahita vokatra lehibe ianao ao amin'ilay zaridaina. Ireo mpangalatra nahitam-bokatra voatsinjara dia namahana loko, greens, bulbs. Ny fizarana sy ny fametrahana ny famokarana sakafo mahasalama dia manatsara ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra azo ampiasaina ary hampitombo ny lanjany amin'ny loha fara-fahakeliny.
Inona no lohataona hanome sakafo tongolo lay rehefa ririnina?
Matetika, ho an'ny fambolena tongolo lay, dia ampiasaina ny teknika iray izay manome ny fambolena azy amin'ny ririnina. Io kolontsaina io, na dia mihevi-tena ho tsy mendrika aza, dia mitaky fientanam-po. Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba fihinanana tongolo gasy rehefa vita ny ririnina amin'ny fanantenana ny fivoahan'ny fampiroboroboana. Ny organika dia manan-danja ho an'ny zaridaina izay tsy te handevona ny simia, noho ny fampiasany mullein , fanosehana akoho, lavenona. Ny akora mineraly amin'ny tongolo lay mba hampitombo ny vokatra dia tokony hanan-karena amin'ny azota amin'ny fanombohana ny fitomboan'ny zavamaniry amin'ny ampahany maitso amin'ny zavamaniry, potassium ary ny phosphorus rehefa mamorona ny loha.
Daty omena sakafo amin'ny tongolo lay
Ny dian-tongotr'io ririnina io dia vita indroa. Rehefa latsaka ny oram-panala dia mijaly noho ny tsy fahampian'ny singa mineraly manan-danja amin'ny zavamaniry ny kolontsaina. Ny dingana fahatelo amin'ny fametrahana fambolena miaraka amin'ny endriky ny sakafo dia mianjera amin'ny fahavaratra (faran'ny volana Jolay) - amin'ny fanombohan'ny fananganana ny loha sy ny famongorana ireo zana-tsipìka. Ho an'ny fantsom-pandrefesana alohan'ny fiotazana dia mety tsara - 2 tbsp. ranomandry ho an'ny rano 10 litatra, voahaja ny fitsipika - 3-4 litatra isaky ny 2 .
Ny fepetran'ny sakafo voalohany sy faharoa dia mety hikosoka kely, ary ny fahatelo dia tsy maintsy atao mazava tsara amin'ny fandaharam-potoana. Raha efa vita hatry ny ela dia ho lasa ny fananganana zana-tsipika sy zana-ketsa ny mineraly entina, ary mety hampihena ny vokatra ny fahatarana. Ny fanangonana fanampiny dia natao raha misy marika famantarana ny tsy fahampian-tsakafo misy eo amin'ny zavamaniry.
Ny akanjo voalohany vita amin'ny tongolo lay taorian'ny ririnina
Ny fiakarana voalohany voalohany amin'ny tongolo gilasy aorian'ny tifitra amin'ny lohataona dia nitranga 1-2 herinandro taorian'ny nianjeran'ny lanezy. Natao hampiroboroboana ny zavamaniry ao amin'ilay faritra maitso izany. Aorian'ny ririnina, ny akora misy sticky dia ny diloilo voalohany. Rehefa avy misakafo, dia tokony ho feno rano ny tongolo lay, ary tsy hivoatra ny tany. Ho an'ny fiakarana voalohany, ny zavamaniry dia mamaly amin'ny fitomboan'ny fakany sy ny volo maitso.
Ankoatra ny tongolo gilasy, izay miorim-paka amin'ny ririnina, dia misy tongolo amin'ny lohataona - nambolena hatramin'ny fiandohan'ny lohataona. Ny fikarakarana ho an'ny vokatra roa dia mifanipaka tanteraka. Ny fahasamihafana ihany dia ny fisian'ny zavamaniry any amin'ny toeram-pambolena amin'ny ririnina, noho izany, ny sakafo voalohany dia tanterahina aloha. Ny tongolo vita amin'ny tongo-tsakan-tsolony dia mihosotra amin'ny sticky aorian'ny fikajiana amin'ny zana-ketsa amin'ny ravina telo na efatra.
Ny akanjo faharoa faharoa amin'ny tongolo lay
Ny famokarana faharoa amin'ny tongolo lay dia manomboka 14-15 andro aorian'ny voalohany, zava-dehibe ho an'ny voamadinika sy lohataona. Ny fanapahan-kevitra ny hanome sakafo tongolo lay rehefa ririnina, dia zava-dehibe ny mahafantatra fa ny composition dia tsy maintsy misy ihany koa ny azota, fa izao no fotoana hamerenana ny zavamaniry amin'ny potassium sy phosphorus haniry ny loha. Miala sasatra ela izy ireo, noho izany dia ilaina ny mitondra azy ireo eo amin'ny tany mialoha. Ny fanonganam-bokatra amin'ny tongolo lay tamin'ny volana Mey dia vita amin'ny fandroahana. Hatramin'ny tapaky ny volana jolay dia tokony hajanona ny fiomanana amin'ny nitroka - manomboka ny fananganana ny ampahany ambanin'ny tany.
Ahoana ny hanomezana tongolo gilasy amin'ny lohataona?
Ny fiakanjo fohy amin'ny tongolo ririnina amin'ny fiandohan'ny lohataona dia azo avy amina kompana samihafa, na organika na mineraly. Amin'ny tranga voalohany, tsy afaka mampiasa ny simia sy ny rano ianao ao am-pandriana, tsy manahy momba ny nitrate. Ny malaza ihany koa dia ny fikarakarana volon-koditra amin'ny tongotra ny tongolo lay miaraka amin'ny vatana. Azonao atao ny manome sakafo tongolo lay rehefa ririnina - organic:
Mullein - azonao atao mandritra ny vanim-potoana mitombo. Mba hanomanana ny saosy dia alefa ao anaty barika ny dite, alao amin'ny rano 1: 5 ary avela hivezivezy mandritra ny 2 herinandro. Ny vahaolana dia mihena amin'ny rano 1:10, mihatra amin'ny fandriana (norma 8-10 litatra per 2 m).
Ny fako sotro - dia hanampy amin'ny fiatrehana ny famoahana ny ravina. Izy io dia tondraka rano 1:15 ary navela hivezivezy nandritra ny 2 herinandro. Aorian'ny siny rano dia mihalevina ao anaty siny amin'ny rano ary ny zavamaniry dia homana amin'ny lohataona.
Mangatsiaka mineraly amin'ny tongolo lay amin'ny lohataona
Matetika ireo mpitrandraka harena an-kibon'ny tany dia ampiasain'ny tantsaha amin'ny fambolena lehibe. Amin'ny tranokala kely, ny fampiasana azy dia azo atao, raha tsy misy fomba hahazoana organika. Standard feeding:
Ny entona mineraly voalohany amin'ny tongolo lay dia tokony hitazona ny azota mba hananganana ny masony maitso. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mamela ireo simika tsotra: vahaolana amin'ny urea (carbamide) - 1 tbsp. tavoahangy fanomanana amin'ny rano 10 litatra na nitrate ammonium - 15 g isaky ny 10 litatra ny rano. 3 litatra aviavy misy fasana dia ampy amin'ny fandroana 1 m 2 fandriana.
Amin'ny maha-fototra ny sakafo faharoa, afaka mandray vahaolana ny nitroammophoska - mangeja 2 tbsp. ranom-boankazo anaty rano 10 litatra, ny fitsipiky ny fanosorana - 4 litatra isaky ny 1 m 2 . Io dia hanosotra ny zavamaniry amin'ny phosphorus mba hananganana ny loha.
Ahoana ny hanomezana tongolo lay rehefa avy ririnina miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny olona?
Miaraka amin'ny tsy fahavitrihana handrava ny simia, ny fikarakarana ny tongolo lay miaraka amin'ny fikarakarana volom-borona dia atao:
Ny lavenona vita amin'ny hazo dia hametaka ny zavamaniry miaraka amin'ireo sakafo mahavelona ary handoto ny tany. Azo ampiasaina amin'ny fararano sy amin'ny volana may-Jona amin'ny dingana faharoa amin'ny fanafody. Ny lavenona dia matory eo anelanelan'ny fandriana na ny zavamaniry dia feno rano mangotraka (200 g of aha ho an'ny rano 10 litatra).
Mihamitombo ny fitomboan'ny tongolo lay, miady amin'ny fofona sy ny ravina maina. Ny mineraly dia manimba ny tany, miaro amin'ny nematodes, bibikely toy ny kankana. Ho an'ny fanomanana siramamy dia makà 3 tbsp. siramamy sotro eo amin'ny siny rano, dia milatsaka 3 litatra isaky ny 1 m 2 ny zavamaniry.
Ny alikaola amiônika dia mety amin'ny famenoana ny menaka. 25 ml ny zava-mahadomelina dia mihena amin'ny rano 10 litatra ary voapoizina ny zavamaniry. Amilika dia mamotika ireo parasy ary manenika ny tongolo lay miaraka amin'ny azota. Azo ampiharina mandritra ny vanin-taona mahazatra izany.
Ahoana ny hanomezana tongolo gilasy amin'ny lohataona, raha mivadika mavo izy?
Ny mpamboly legioma dia mamoaka ny fanontaniana indraindray: nahoana ny kolontsa mavo no mivoaka ary ahoana no hiatrehana ilay olana. Matetika dia noho ny fandikana ny teknolojia fanolokoloana izany. Antony mety hanodinkodinan'ny ravina amin'ny tongolo gilasy:
Nanjary nalona ny zavamaniry. Avy eo dia tokony hoentina amin'ny biostimulator mitombo toy ny Epin, Zircon, HB-101.
Nanjary narary tamin'ny aretim-borona na aretim-po ny zavamaniry. Tsy maintsy afoy izy, ny voankazo dia tsy maintsy harary amin'ny voankazo Phytosporin, Maxim. Tsara kokoa ny manaikitra ny tany miaraka aminy alohan'ny fambolena.
Ny tongolo gasy dia tsy ampy sakafo - nitroka na potasy. Avy eo dia tsy maintsy ampiana fanampiny izy ary voapoizina amin'ny urea, vovoka vita amin'ny hazo. Ny felana dia azo ahosena amin'ny solifara potassium - 1 teaspoon per 1 lit de water.
Ny parasy dia afaka miteraka fandeferana. Ny kankana kely sy ny nematodes dia azo esorina amin'ny famafazana ny zavamaniry amin'ny vovo-sira (200 g isaky ny 10 litatra amin'ny rano).
Ny fanosorana ny ravina dia mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo. Ny menaka dia tokony ho rano amin'ny fotoana, tsy mamela ny fanamainana mafy ny tany.
Mitombo ckomôma ao anaty barika
The phloem styloid
Plumeria ao an-trano
Azarina - mitombo amin'ny voa
Tombom-bary be karazan-tsimparifary amin'ny fifantenana any Siberia
Sarcoma - inona moa izany, homamiadana sa tsia?
Fangatahana fanala amin'ny alàlan'ny fiara moto
Ahoana no hanamboarana akoho iray ao anaty lafaoro?
Fomba entina manangom-bary ny fatiantoka?
Sakafo ara-pahasalamana amin'ny fahavaratra
Astrolojia amin'ny daty nahaterahana
Ilay mpilalao sarimihetsika, Kim Basinger, dia nandeha teo ambany satroboninahitra?
Leonardo DiCaprio sy Kelly Rohrbach
Motilak - famantarana ny fampiasana sy ny tsiranoka rehetra amin'ny fidirana ny zava-mahadomelina
Cupcake - fomba tsotra sy mahasalama